Izinwele emilenzeni yami ziphupha kanjani: ukuboya izinwele zami emilenzeni yami ngophupho, izinwele ezinzima
Yini exwayisa ngephupho lapho ubona imilenze enomuncu? Ukuhumusha
Izincazelo eziningi zephupho ziphatha iphupho mayelana nemilenze enomuncu njengophawu lokuphila kahle kwezezimali kanye nesimo sezimali esizinzile, kodwa ukuze incazelo isiphelele, kubalulekile ukukhumbula ngokucophelela yonke imininingwane yesakhiwo nokubonakala kwezinyawo. Njengoba kunemibono eminingi engacabangi mayelana nemibono yasebusuku, kufanele sikhulume kabanzi ngalokhu.
Iyini imilenze enomuncu ibukeka sengathi?
Encwadini yephupho likaMiller kubhaliwe ukuthi iphupho elinjalo lifaka uhambo olusheshayo. Uma izinwele emilenzeni zide, umgwaqo uzogcwala ubunzima futhi kuzodingeka ukhuthazelele izikhathi eziningi ezingathandeki, uzinqobe.
UFrud ukholelwa ukuthi amantombazane angaphupha imilenze enomlomo, ngokwawo noma kumuntu, uma ebuhlotsheni bomuntu siqu nguye ozoba ngumholi. Indoda yokuphupha yemilenze yakhe enomuncu ithembise ukuzithoba kobulili obuhle kakhulu emsebenzini.
Owesifazane owabona imilenze yakhe enomuncu ephusheni, udinga ukuhlolisisa indawo ozungezile. Kungenzeka kube nabantu abasha abazwela kakhulu kumphuphi futhi bangase babe ngabangane abangaba khona bokuphila.
Indoda eye yabona izinwele emilenzeni yakhe nowesifazane ingalungiselela kalula impumelelo. Bazohamba naye kuzo zonke izigaba zokuphila ngaphandle kokunye okuhlukile: emsebenzini, ukutadisha kanye nangaphambili.
Qinisekisa ukukhumbula ukuthi yiziphi izinwele ezinombala. Kulokhu kuncike ezimweni eziningi nezenzakalo empeleni.
Umbala wezinwele ephusheni
Mhlophe noma ukhulume ngenkulumo yokuthi umculi ucabanga kanjani ngokufa nokuguga. Isimo sengqondo esinjalo singavumeli ukuphila nokufeza imigomo ebekiwe.
Izinwele ezinomsoco emilenzeni - isibonakaliso sokunganeliseki nokuphila kobulili nomlingani.
Izinwele ezimnyama ezinombala zixwayisa intombazane ukuthi esikhathini esizayo esiseduze angase abe yisisulu sezinkohliso nokuziqhenya kwabangenayo. Amadoda afana nalombono athembise ukuthandana okuqhakazile nempumelelo embusweni obuseduze.
Umbala obomvu obomvu wesifazane uyisibonakaliso sokukhulelwa okusheshayo. Kwesilisa, leli phupho alilona elihle kakhulu. Lesi yisixwayiso sokuthi kufanele aqaphele ukubonakala kwakhe, ngaphandle kwalokho ubungozi bokulahlekelwa ukuthandwa phakathi kwesigamu esihle.
Shabula izinwele zakho ezinyaweni zakho
Emasikweni asendulo, ukuqeda izinwele (ngisho nokunqunywa kwezinwele) kwakubhekwa njengesibonakaliso esibi. Ngalezo zinsuku, abantu bakholelwa ukuthi kwakuyizinwele lapho wonke amandla omuntu efihliwe khona nokuthi emva kokugcoba, wayenqatshelwe ukuvikelwa.
Uma umphuphi ebona imilenze yakhe enomunwe futhi enesifiso esinamandla sokuziphuca, empeleni kuzodingeka azivumelanise yena nokuthi zonke izifiso neziphupho zakhe azikwazi ukuzenza okwesikhashana.
Njengoba kwezinye izincwadi zephupho i-hairline ephakanyisiwe emlenzeni ibhekwa njengesibonakaliso sokuvikelwa, kukhona incazelo yokuthi ukuphunga izinwele kusho izinguquko ezizophuca umphuphi wenduduzo evamile.
Enye iphuzu elibalulekile ukuthi izenzo ezinjalo kufanele zithathwe njengesidingo sokwenza izixazululo ezingezona ezejwayelekile zokunqoba isimo sokuphila esinzima.
U-Miller uthi ukuboya izinwele ezinzima emilenzeni yakhe kubonisa ukuthi lo mphupho uziphathe kabi, unamavi kakhulu ngakho-ke angakwazi ukufeza isikhundla esifanele emphakathini noma emsebenzini.
Uma indoda idinga ukuphuca imilenze kumuntu ongamazi, khona-ke esikhathini esizayo uyenazinkinga, engakwazi ukuyivimbela. Zihlobene nesici sezinto ezibonakalayo. Kungaba ukulahlekelwa kwezindinganiso ngenxa yempi enkulu noma ukweba.
Isiphakamiso sokushada ephusheni, kusho ukuthini?
Isivuno sephupho lokugcina. Ngabe isithonjana ngokuvamile sibonakala kanjani?
Ingabe kufanelekile ukwesaba iphupho lapho kukhona ummese?
Isaladi ephuma e-artichoke yaseJerusalema
Izimbangela zengqondo-zengqondo zesehlukaniso
Ungakuyeka kanjani ukhathazeka futhi uphile ngokuthula
U-Anastasia Kostenko wanqaba u-Olga Buzov wokuthola imali
Yini abantu abathanda ukuyithola njengesipho?
Iyini i-anemia kulabo abakhulelwe?
I-steak ehliwe ku-marinade
Ukunakekelwa kahle kwamazinyo
UCaterina Spitz ekuqaleni wasekela uBrad Pitt, isithombe
Ukusabalalisa ubuso beJapane